ကလေးတွေကို စိတ်လိုက်မန်ပါ မလုပ်ရဘူးလေ.. နော်
မလုပ်ရဘူးလေ... မသီတာက လိမ်မာပါတယ်...
ကလေးတွေဆိုတာ ကိုယ်ဒေါသထွက်သမျှ ကိုယ်ဆူပူသမျှ ခံကြရမှာပါ...
ဒေါသတွေပွရင် မျက်နှာတွေလဲ ရင့်လာတတ်တယ်လေ...
တစ်ရက် ရုံးကပြန်လာတော့ စိုနေလို့ လှမ်းထားတဲ့ထီးကို ပေးမဆော့လို့ သူငိုနေခဲ့တာလေ။ မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပြီး တရေးနိုးတော့ ထီးအကြောင်းပြန်သတိရပြီး ထပ်ငိုတာ... ထီးလေး ခဏတဖြုတ်ပေးဆော့လိုက်တော့မှ ကျေနပ်သွားတာ။
ခုအရွယ်မှာ စိုနေတဲ့ ထီးကိုပေးဆော့တောင်မှ သူဘယ်ဆော့ချင်တော့မလဲနော်။ စုချစ်တို့လည်း အိတ်အရွယ်လောက်က စာကြည့်ရမှာကို တီဆားနဲ့ တို့လိုက်သလို တွန့်လိမ်နေတာပဲလို့ မေမေကပြောလေ့ရှိတယ်...း-)
လိမ်မာယဉ်ကျေးပြီး ရိုးသားမှုရှိတဲ့ သားလေးတွေရတာကိုက မမသီတာတို့ ... ကံကောင်းလှပါပြီ။
လူကြီးတွေရဲ့ ဆုံးမမှုကိုလည်း မပစ်ပယ်နိုင်ဘူး။
ချော့ပြီး ဆုံးမ ပါမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ချောက်လိုက်ရင် ပြန်ကန်လာမဲ့ (ဂန်နကောစ) ရဲ့ဒဏ်ကို အမေခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နွေးထွေးပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ။
အဆင်ပြေပါစေ. ကလေးမရှိတော့ သိတ်မသင်တတ်ဘူး။
ဒါပေမနဲ့ကလေးက ကလေးပေါ့ မသီတာ. သူ့အတွေးလေးနဲ့သူပေါ့ လူကြီးလို့ ရင့်ကျက်ရင် လူကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့။
ညီမတို့ ငယ်ငယ်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ.. ။ ကျောင်းသွားခါနီးရင် ဗိုက်မူးတယ်၊ ခေါင်းအောင့်တယ်နဲ့ စမ်းသပ်မရတဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်တော့တာ....။
၁၃-၄-၅ နှစ်လောက် ရောက်ရင် သူ့အသိနဲ့သူ စာလုပ်ပါလိမ့်မယ်....။
ဒေါသတွေ မကြီးနဲ့နော်....။ မျက်လုံးစိမ်းးတွေနဲ့လည်း ကလေးကို မကြည့်ပါနဲ့...။
ကြက်ကြော်တွေတောင် အိမ်ယူလာသေးတဲ့ သားကိုများ ဒီမေမေမို့ မျက်လုံးစိမ်းရက်တယ်။
ကလေးဆော့တာဟာ သဘာဝပါဗျာ။ လူကြီးတွေသာ ဆော့ရင်သာ သဘာဝမဟုတ်တာပါ။ နော့ဗျာ။
အဲဒီ ကျွန်တော်သည် သိင်္ဂီနွယ်လည်း ဖြစ်နေသေးပေသည်။
သည်တစ်ခါ စာမေးပွဲတော့ ရှောရှောရှူရှူ ပြီးသွားတယ်.. တို့လည်း သမီးငယ် နေမကောင်းတာရယ် ..မအားတာနဲ့ အနီးကပ် ကြည့်ပြီး မကျပ်နိုင်တော့ဘူးလေ.. အဝေးကပဲ စောင့်ကြည့်လိုက်တော့လည်း အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ...။
မသီတာရေ့... သည်မှာလည်း အဲလိုပဲ စာလုပ်ဖို့ အမြုပ်ထွက်အောင် အော်နေရတယ်... တနေ့တနေ့ တီဗီကြည့်ဖို့ ဂိမ်းကစားဖို့ပဲ ထိုင်စဉ်းစားနေကြတာလေ...
ကျမစိတ်တွေလဲဖောက်လာပြီ... CA1 နီးပြီလေ.. ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ??? :(
26 Feb 09, 17:16
သက်ဝေ: ဟေး.. တို့ ၁ ကွ... လို့ ရေးဖို့ မေ့သွား... မေ့သွား... မေ့သွား...
26 Feb 09, 23:21
ပေါက်: မသီတာ..ပထမအပိုဒ်က ကျနော်နဲ့ ခံစားချက်တူတူပဲ..သူ့ကိုအနာတရ ဖြစ်အောင်မလုပ်ဖူးဆိုတဲ့..ဆုံးဖြတ်ချက်လေးရ
26 Feb 09, 23:22
ပေါက်: မမနဲ့ ဆင်ဆင်မန့်တာကြည့်ပြီးး ချန်းချန်းကိူ သူတို့ဆီပို့ပေးလိုက်ချင်တယ်..၁ပတ်လောက်..
တစ်သက်လုံး စာသင်ရမယ့်ဟာ ။ အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ အစ်မတို့ရယ်။
သူ့ ရဲ့ကောင်းတဲ့ အပြုအမူ အနေထိုင်လေးတွေကိုပဲ ရွေးပြီး အမေသိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ခဏ ခဏ
ပြပေးပါ။ မကြိုက်တဲ့ အကြောင်းရှိရင် ပြောလဲ မပြောနဲ့
မျက်လုံးနဲ့လဲ မကြည့်နဲ့နော် ။စိတ်ထိန်း ။
ကျွန်မလို စိတ်နဲ့ လူကြီးဖြစ်လာမဲ့ ကလေးဆိုရင် မျက်လုံးနဲ့ အဲလိုကြည့်တဲ့ လူကြီးတွေကို ခုထိ မှတ်မိပြီး ကိုယ့်အပစ်ကို အမှတ်ရနေတယ်။ ပြင်တော့မပြင်ဘူး ခုထိ...။
ကိုယ့်ကို တော်တယ်ပြောတဲ့ လူတွေရဲ့ စကားကို မှတ်ထားပြီး သူတို့ပြောသလို တော်အောင် အမြဲ ကြိုးစားနေတာလည်း ခုထိပဲ။
ဒါကြောင့် သားသားတို့ အမေရေ ..
မတိုတတ်တဲ့ စိတ်ကို ရှည်ရှည်ထားပါ။
(ဆရာမကြီးလုပ်ချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ ဟိဟိ)